नेकपाको चियापान : चालीस हजार सहभागी, एकताको सन्देश
काठमाडौँ, १० कात्तिक । “नेपालका राजनीतिक दल सधँै झगडा मात्र गर्दैनन् मिल्छन् पनि भन्ने सन्देश हामीले दिँदै आएका छौँ ।” चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य टङ्क कार्कीले भृकुटीमण्डपमा नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग चियापानपछिको अनुभूति हो यो ।
उनले भने, “अरु बेलामा हामी राजनीतिक विषयमा विवाद गर्छौं तर सांस्कृतिक चाडपर्वका अवसरमा एकापसमा घुलमिल हुन्छौँ भन्ने सन्देश विश्व समुदायलाई दिन चियापान कार्यक्रम सहयोगी हुँदै आएको छ ।”
विगतमा दशैँ, तिहार र नेपाल सम्वाद तथा छठ पर्वका अवसरमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले फरक–फरक रुपमा आयोजना गर्दै आएको चियापन कार्यक्रम यो वर्ष पार्टी एकता भई नेकपा गठनपछि पहिलो पटक आज आयोजना भएको हो । नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य दलले पनि चाडपर्वका अवसरमा यस्तो चियापान कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
नेकपाको जिल्ला र जनसङ्गठनबीच एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाए पनि विगतमा एमाले र माओवादीका नेता कार्यकर्ताको पहिचानमा चिनिएका नेता कार्यकर्ता आज एकै पार्टीको र एकै लक्ष्य बोकेका सिपाहीझैँ अन्तरघुलित भएका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गत जेठ ३ गते एकता भएको थियो । तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले वि.सं. २०५१ को दशैँका अवसरमा शुभकामना आदानप्रदानका लागि चियापान कार्यक्रमको थालनी गरेका थिए । त्यसपछि नियमितरुपमा यो कार्यक्रम हुँदै आएको छ ।
योङ कम्युनिष्ट लिगका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशीखा’ले चियापानबाट पार्टी एकताको सन्देश प्रवाह भएको जनाउँदै भने, “एकतापछि कार्यकर्ताबीच यति ठूलो भेटघाट भएको थिएन । यसले नेता र कार्यकर्ताको दूरी नजिक्याउने काम गरेको छ । अब यो सन्देश देशव्यापी बनाउनुपर्छ ।”
तत्कालीन एमाले नुवाकोटका जिल्ला सचिवालय सदस्य पूर्णलाल श्रेष्ठले जिल्लागत एकताले पनि पूर्णता पाएको भए कार्यकर्तामा थप उत्साह पैदा हुने टिप्पणी गरे । अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष दीपक देवकोटाले चियापानमा उत्साहजनक सहभागिता देखिएको यसले पार्टी एकताको भावनात्मक एकता प्रदर्शन गरेको दाबी गरे ।
दुई तिहाइ नजिकको समर्थनका साथ सत्तारुढ दल बनेको नेकपाको चियापनमा सो दलका नेता कार्यकर्ताका साथै सर्वसाधारण र समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिको उल्लेख्य सहभागिता थियो । अस्वस्थ्यताका कारण प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित नहुँदा केही खल्लो महशुस भए पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, गृहमन्त्री एवं नेकपाका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल, पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलगायत सहभागीलाई दिनभर स्वागतमा व्यस्त भएका थिए ।
देउवा आएपछि रौनक
मध्याह्न १२ बजेदेखि शुरु भई साँझ ५ बजेसम्म चलेको चियापनमा शुरुदेखि नै सहभागीको लाइन लागेको थियो । पद्मोदय मोडदेखि भृकुटीमण्डपसम्म लाइन लागेको थियो भने एकैपटक मानिसको प्रवेश हुँदा व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे परेको परेको देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली नआएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि नआउने त होइन भन्ने सञ्चारकर्मीले जिज्ञाशा राखिरहेका बेला उनी कार्यक्रमको अन्त्यतिर भृकुटीमण्डपमा आइपुगे । अध्यक्ष प्रचण्डलगायत वरिष्ठ नेताले देउवालाई स्वागत गरेको र उनीहरुले चिया पिएको दृष्य कैद गर्न सञ्चारकर्मी एकाएक झुम्मिएका थिए ।
आयोजकले ५० हजारका लागि निमन्त्रणा गरेकामा चियापानमा ४० हजारको सहभागिता रहेको नेकपा निकट अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनले आयोजनाका लागि रु. १० लाख रकम पेश्की निकासा गरिएको बताए । चियापानमा सालको पाताको दुनामा निमकिन, कचौरी, केरा, लड्डु राखिएको थियो । चिया र पानीका लागि अलग्गै प्रबन्ध थियो ।
उनले सदियौँदेखि चलिआएको चाडपर्वले नेपालीबीच एकता, मेलमिलाप र सहिष्णुता सन्देश दिने बताउँदै भने, “संविधान जारी भइसकेको छ । अब मुलुक समृद्धि, विकास र सामजिक न्यायसहित समाजवादउन्मुखको यात्रामा अगाडि बढ्न र सिङ्गो नेपालीलाई एकताबद्ध बनाएर जाने सन्देश यस्ता कार्यक्रमबाट हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ ।”